Archive du 20170515
Hery Rajaonarimampianina Tratry ny ompa variraraka
Raha fanadiovan-tena sy fakana ny fon�ny vahoaka no tanjon�ny filoha Ankehitriny Hery Rajaonarimampianina tamin�ny famoronana ilay fandaharana antsoina hoe �Le Rendez-vous� na �Fotoam-bita� any anaty tambajotra �Youtube� sy ny tambajotra fesiboky, dia vao mainka vely kanota no mahazo azy.
Annick Ratsiraka �Fampihavanana no vahaolana eto�
Loza amin�atambo ary mifanohitra tanteraka amin�ny fomba fisainana tena Malagasy ny fanolanana misy etsy sy eroa, hoy i Annick Ratsiraka, araka ny resaka nifanaovana taminy omaly.
Fanesorana an�i Nicole R, mpanolotsain�ny Filoha Resaka sinema indray ?
Efa nivoaka tamin�ny haino aman-jery ny herinandro lasa teo fa noroahina tsy ho mpanolotsain�ny filoham-pirenena intsony i Nicole Randrianarison.
Marc Ravalomanana � Tsy voafehy ny filaminana sy ny kolikoly eto �
Mitohy hatrany ny fitetezam-paritra ataon�i Marc Ravalomanana any Eoropa. Nisy ny resaka nataony tamin�ny mpanao gazety Alemana ny faran�ny herinandro teo ka nanazavany ny zava-misy marina eto Madagasikara.
Riana Andriamandavy VII Antomotra ny fisamborana azy ?
Raha nandiso ny fisian�ny taratasy fampiantsoana ny loholona Riana Andriamandavy VII ny zandarimaria tany aloha, dia efa nanaiky ny faran�ny herinandro teo fa efa tonga eny am-pelatanan�izy ireo ny taratasin�ady nalefan�ny
Me Willy Razafinjatovo �Tsy ny tolona no tsy nampandroso�
Anisan�ireo mpitolona tamin�ny 13 mey 1972 ny mpisolovava Willy Razafinjatovo na Olala.
Edouard Tsarahame �Norahonana aho�
Tsy nahazo olona araka ny nantenainy ho tonga hanotrona azy ireo tetsy amin�ny kianjan�ny 13 mey ny sabotsy teo ry zareo avy eo anivon�ny Rodoben�ny Malagasy Tia Tanindrazana ho an�ny Fanorenana na ny RMTF.
Fandravana ny fotodrafitrasam-panjakana Tsy eken�ny vahoakan�i Bongatsara
Mbola mitohy hatrany ny olana momba ilay ady tany eo amin�ny toby fiantsonan�ny taksibe eo Amboanjobe, kaominina Bongatsara Atsimondrano.
Taratasin�i Jean Mpampidororororo
Manao ahoana ianao izao ry Jean ? Faly ve ianao mahita fa miha midororororo andro aman�alina ny tanorantsika ? Tsy vitan�ny tsy an�asa ny androatokony fa tsy maharaka ny tantaram-pireneny koa.
Loholona Randriamihaingo Berthin Tokony hapetraka ny taranja fahaiza-miaina
Mitaky ny hametrahana ny taranja fahaiza-miaina any an-tsekoly ny antenimierandoholona tamin�ny alalan�ny loholona avy amin�ny HVM Randriamihaingo Berthin ny faran�ny herinandro teo.
Mahana amin�ny ratsy atao !
Tsy mbola nisy teto ambonin�ny tany izany fitondrana mandrara sy manakantsakana ny mpanao politika na ny olom-pirenena hanamarika ny fanamarihana ny tolona nitakiana fanovana ary kihon-dalana lehibe teo amin�ny tantaran�ny firenena izany.